Ny ety ambany tahaka ny any ambony… | NewsMada
Efa mahazatra ny mahita olona malotoloto mivalandotra amoron-dalana. Tsy fantatra na reraka, na noana, na mamo, na marary, na maty. Zara raha mijery ny mpandalo? Tahaka ny efa mahazatra ny tsy firaharahan’ny tomponandraikitra, isan-tsehatra na isan’ambaratonga, olona hoe tsy hita popoka na matimaty foana, raha tsy hoe teratany vahiny, na mahabe resaka amin’ny haino aman-jery.
Tsy zava-baovao ny mandre olona, tsy antitra tsy tanora, tsy lahy tsy vavy, mivazavaza eny an-dalambe, miteniteny foana na miteny ratsy. Tsy fantatra na mamo, na adala, na manala ny fony fa manana ny maha izy azy, hono… Tahaka ny tsy maha vaovao ny tomponandraikitra sasany mivazavaza mikabary, na miedinedina… Tsy fantatra raha mbola misy mpihaino sy inoan-teny ihany na tsia.
Efa fahita sy fandre ny hoe misy mpanendaka eny an-dalambe, an-tsena, anaty fiara… Eo koa ny mpamaky trano sy fasana, mpangalatra omby… Mahita raharaha izay manohintohina. Toa jerem-potsiny toy ny tany nahalavoana, na tsy ahafaha-manoatra. Tahaka ny hoe harem-pirenena robain’ny teratany sy vahiny: an-tanety, anaty rano, an-kibon’ny tany. Tsy tohinina amin’ny ataony…
Efa tsy mahataitra ny tsy tan-dalàna etsy sy eroa: mivarotra amoron-dalana, fiara mijanona amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra, mpandeha an-tongotra eny ampovoan’ny arabe… Tsy misy mitaraina. Tahaka ny efa mahazatra ny mahita sy mandre olom-panjakana lehibe tsy meloka amin’ny hoe hosoka sy hala-bato amin’ny fifidianana, fanendrena tomponandraikitra. Tsy ahoana izay fitarainana.
Santionany ireo… Tsy inona fa zava-misy sy iainana: efa mahazatra… Samy manao ny ataony izao na ny vahoaka na ny mpitondra? Tsy misy ifandraisany intsony, afa-tsy izay hoe efa mahazatra izay: gaboraraka, tsy miraharaha ny hafa. Aiza na ahoana no hisian’ny fanarenam-pirenena sy fandrosoana amin’izany? Tsy hita intsony izay marina, tsara sitrapo… Difotry ny faharatsian’ny hafa?
Mbola misy olona azo alain-tahaka ihany, ety ambany na any ambony? Marina amin’ny ataony, azo antoka amin’izay lazainy, mahalala sy mitsinjo ny hafa… Ny fandio iray siny, hono, tsy mahaleo ny fandio eran-tandroka. Vao mainka fa ny ratsy no be, talaky maso, mibahan-toerana noho ny tsara?